May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၃၅)
စာတပိုဒ် ဖတ် သက်ပြင်း တခါချ ပြီး
ပို့စ်လဲ ဆုံး သွားရော..
နှလုံးသား ထဲ ဒဏ်ရာတွေ က
ပိုပြီး နိုးထ လာသလို ပါပဲ..
ဒဂုံ တက္ကသိုလ် အကြောင်း
ကြားသာ ကြားဖူးတာ ဒီပို့စ် ထဲ ဖတ်ရတော့
မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ လို ခံစား မိတယ်
အသည်းနှလုံးတခုလုံး ဆုတ်ခြေပစ်လိုက်သလို စုတ်ပြတ်သွားတော့တာပါပဲ။ ဖတ်ပြီးတော့ ခံစားလိုက်ရတာလဲ အလဲလဲ အကွဲကွဲပါပဲ။ သူတို့ တကယ်ပဲ ဖျက်ဆီးရက်ကြတယ်။
Our current governent derives from so called university DSA or DSTA. They wants to improve only these universities.
There arealot of untold scandals about these universities. A lot of Homo raping, torturing, insulting and even killing each other, especially senior to junior. My nephew studied in DSTA5years ago, he askedalot of money every month because his senior brothers forced him to ask such amount. About5years ago, four seniors killed my nephew in the pond but they mentioned this case as an accident. We couldn't do anything because one senior's father is General. Thats why they also wants to spoil (eradicate) our education system and universities.
တစ်ချို့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြားဖူးပေမယ့်၊ အသေးစိတ် မသိခဲ့ပါ။ တီချယ်ကြီး တာဝန် တစ်ခု ကျေသွားပြီ မှတ်လိုက်ပါတော့။ ပြောလို့ မကောင်းတိုင်းသာ ပြန်မပြောကြရင်၊ နောင်တစ်ချိန် မေ့ကုန်ကြမယ်။
ဒေါက်တာစိန်ထွန်းတို့၊ ဓာတုက ခေါင်းပေါင်းနဲ့ ဆရာကြီး (နာမည်မေ့နေ) စတဲ့ ဆရာတွေရှေ့ (ကိုယ့် ဆရာမဟုတ်ပဲနဲ့) လက်တောင် တွဲမလျှောက်ရဲတာ မှတ်မိသေး :P
ဓါတုက ခေါင်းပေါင်းနဲ့ ဆရာကြီးက ဦးဦးအောင်လေ ကွယ် ( ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟင်.. မှားသွားရင်တော့ များ..မေ့နေတာပဲ ဖြစ်မယ်။ မဟာသိပ္ပံ ပထမနှစ်မှာ သင်ရတယ်)။
ဒီအပိုင်းတွေ ဖတ်ရင်း ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ၀မ်းနည်းပြီးရင်း ၀မ်းနည်းနေရတယ် မေငြိမ်းရယ်။
ဆရာမရေ အမေလူထုဒေါ်အမာ ပြောတတ်တဲ့စကား
”အမေတို့ခောတ်ကလေ....အမေတို့ ခောတ်ကလေ”
ကျမတို့ လည်း ကျမတို့ တက်ခဲ့တဲ့
“ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ခောတ်ကလေ ”
It is with deep sorrow to read all those accounts.
The military junta systematically and intentionally spoiled universities and Burmese education system because they think that the less educated we are, the longer they can rule.
Because of their inconsideration and ignorance, the present generation and the next ones have to be paying the price.
A saying goes "A politician thinks of the next election andastatesman thinks of the next generation." But for these dumb military thugs, they can never think beyond the welfare of their own.
For those unethical teachers and students, they deserve one another.
Thankalot for telling us about these accounts.
တီချယ် .. အလုပ်တွေများတဲ့ကြားထဲက..
၃၅ ကိုရေးပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကိုဖျက်စီးခံလိုက်ရတာ အဆိုးဝါးဆုံးပဲ...
ဆရာမမေငြိမ်းရေ မယုံနိုင်စရာဘဲ။ ဒီလောက် တောင်ပဲလားဟု ဖတ်ပြီး ရင်မောရပါသည်။
*တပည့်လေးတွေနဲ့အတူတူ field trip မှာ ဆရာ/တပည့်မခွဲခြားပဲ နေထိုင်ပညာသင်ပေးတဲ့..အေးချမ်းတဲ့ပညာရည်ပြည့်ဝလွန်းတဲ့
ဆိုးတယ်လို့ပြောခံရတဲ့ကျွန်တော်အပါအဝင်တပည့်တွေကို Respect and kindness နဲ့သူငယ်ချင်းလိုပေါင်းပြီး တပည့်တွေအပေါ်တာဝန်အပြည့်ယူလေ့ရှိတဲ့
အရင်တုန်းကတော့ Geology ဆိုရင် စည်းလုံးတယ်..ဆိုသလိုပဲ တခြားမေဂျာက ကလေးတွေဆိုလည်း ဆရာဆရာမတွေကိုတော့ ချစ်ကြတာပါပဲ..။ ခု ၂၀၀၀ နောက်ပိုင်းမှသာ အပြန်အလှန်ဆိုသလို အားနည်းချက်တွေနဲ့ကိုး။ နောက်တခုပ Geology က သားတို့ ခေတ်တုန်းကလို အမှတ်မြင့်မြင့်နဲ့ ရွေးတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘူးလေ.. အမှတ်ပေါင်း ၂၀၀ နဲ့ လမ်းလျှောက်ခိုင်းပြီး လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ ရွေးတာမျိုးလေ..။ ပြီးတော့ ၀ါသနာပါလို့ ယူတာမျိုးလည်း မဟုတ်တော့ မေဂျာစိတ်မရှိ.. မေဂျာကို မချစ်တတ်ကြတော့ဘူးပေါ့။ တကယ်တော့ ခေတ်စနစ်ရဲ့ သားကောင်ဖြစ်ရတာလည်း ပါတာပါ...။
မျှော်နေမိတဲ့ မြသီလာ (၃၅) အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဆရာမရေးထားတာက သရုပ်ပေါ်လွန်းတော့ ဒဂုံတက္ကသိုလ် အကြောင်းဖတ်ရတာ ရင်ထဲမှာ တော်တော် ထိခိုက်ရပါတယ်...။
ကမောက်ကမ ပညာရေးစနစ်ထဲ သားကောင် ဖြစ်ကြရတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ တပည့်တွေ... အခုရော..
ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်နေကြမလဲ မသိဘူးနော်...။
Unbelievable is nothing!
ဟနက ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသလိုတော့ ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဘယ်လိုဆိုတာ မသိဘူး။ ဗိုလ်တထောင်ကနေ မိန်းကိုလာမတက်ရတော့တဲ့ သူငယ်ချင်း ပြောတာ တွေကြားဖူးတော့ သူက ဟနတို့လို အာရ်စီတူး ကနေ မိန်းကို မကူးရလို့ ဒဂုံကို တမင်စိတ်နာပြီး မိန်းမှာ မတက်ကြရလို့ ဒဂုံကို မကောင်း ပြောတာ ထင်မိသေးတယ်။ နောက်မှ ဟို မောင်လေးပဲ လေ..သူ ရေးထားတွေဖတ်မိတော့ သူတက်ခဲ့တဲ့ ဒဂုံကိုနည်းနည်း ရေးရေးမြင်လာတယ်။ ခု မြသီလာမှာ ဖတ်မိတော့မှ သေချာ သိတော့တယ်။ မိန်းမှာ ဟနတို့ ဖိုင်နယ်တုန်းက အတန်းထဲကကျောင်းသားတစ်ယောက်က သူ ခိုးချတာကို လာဟန့်တဲ့ ဆရာမကို အဲဒီ ဆရာမ ငါ အလုပ်ပြုတ်အောင် တိုင်မယ် ဆိုတာ နားနဲ့ ဆတ်ဆတ်ကြားတုန်းက အတော်လေး အံ့အားသင့်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုကျောင်းသားမျိုးတွေ ရှိသလားပေ့ါ။ တကယ်တန်းကျတော့ အပုံကြီး ဆိုးနေပါပေ့ါလား။ မြသီလာ မမ ရေးနေတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မသိရတာတွေ သိရတယ်။ ခံစားချက်တွေလည်း အစုံဖြစ်လာတယ်။ ခု (၃၅)က ဒဂုံအကြောင်းဖတ်ရတာ မျက်ရည်တွေကျလာတယ် ဘာလို့လဲ မသိဘူး။ကိုယ်တိုင်က ဆရာဆိုတဲ့ ဖီလင်ကြောင့်မို့ ထင်တယ်။ ၂၀၀၇ တုန်းက ဟန သင်တဲ့ဘာသာမှာ ဆရာတစ်ယောက်လိုလို့ အဲဒီဘာသာရပ်ဘွဲ့ကလည်း ဒီကနိုင်ငံသားတွေ မရှိတဲ့ဘွဲ့ဖြစ်နေတော့ ကျောင်းတုန်းက ဆရာတစ်ယောက်က သူ့တပည့်တစ်ယောက်ကို လျှောက်ခိုင်းလိုက်တာ အဲဒီတစ်ယောက်က မာစတာကို ဒယ်ဘယ် ဒီဂရီ ။ထရန်စခရစ်ပ် ကလည်းအတော်လေး ကောင်းတယ်။ သူတော်တာလဲ သိတယ်။ အဲဒါကို ဒီက အိပ်ခ်ျအာရ် က ရီဂျက် လုပ်လိုက်တော့ မေးကြည့်မိတာပေ့ါ။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကမို့လို့တဲ့ သူတို့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ တက္ကသိုလ်မဟုတ်လို့တဲ့။ (အဲဒီနောက်ဆက်တွဲတွေ တွေးမိတာတွေ အများကြီးပဲ..အတွေးတွေတိုင်းမှာ ပူလောင်လာတယ်။) ဆက်မပြောချင်တော့ပါဘူး မမရယ်။
ဂျီအိုလိုဂျီ လို လူနည်းနည်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတစ်ရပ်ကိုပေးမယ့်ဆရာတွေကို ရိုသေတတတ်တဲ့ မေဂျာမျိုးမှာတောင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် တက္ကသိုလ်ရဲ့ ပြယုဂ်ကတော်တော်မြင်မကောင်းတော့ဘူးပဲ..
မသိသေးတာတွေ စိတ်ပျက်စွာသိလိုက်ရတယ်။ ရင်လေးစရာပဲ။
အစ်မရယ် ဖတ်ရတာတွေကရင်ထဲမှာ မကောင်းဘူး။ ညီမတို့ခေတ်ရောက်လာတော့ အဝေးသင်မှာ ဒီလိုမျိုးတွေရှိတာတော့သိတယ်။ ကျောင်းသားက ဆရာတွေကိုမလေးစားတာ။ (ဘယ်လေးစားမလဲ သူတို့ပိုက်ဆံပေးရင် အောင်နေတာကိုး) ဆရာတွေကလည်း ငွေမျက်နှာတစ်ခုပဲ ကြည့်တာ။ တပည့်လုရင်းဆရာဆရာမအချင်းချင်း ရန်စောင်ကြတာ တွေကြားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေ Day တက်တဲ့အခါတော့ အဲဒါမျိုးတွေသိပ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ တပည့်တွေကလည်း ဆရာမတွေကိုချစ်တယ်။ နယ်မို့လို့လားတော့ မသိဘူး။ တစ်ခုခုဆို တပည့်ကိုပို အပြစ်မြင်ကြတာ လေ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဆရာဆရာမကို ထိလို့ကတော့ ထိတဲ့နေရာမှာရန်ပွဲဖြစ်သွားမှာ။
ထိုင်းရောက်တာ မကြာသေးလို့ မသိရပေမဲ့ သူငယ်ချင်းဖွင့်ထားတဲ့ျြမသီလာအလွမ်းပြေလေကိုစ ဖတ်မိရာကနေ အစအဆုံးမဖတ်ပဲ မနေနိုင်လောက်အောင် ကို စွဲမိသွားပါတယ် ဆရာမရေးထားတဲ့ အရာတွေက တကယ့်အမှန်တရားတွေဆိုတာ လုံးလုံးလက်ခံပါတယ်. သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောဖြစ်တယ် ငါသာ 88အရေးခင်းတုန်းက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆိုယင် တောခိုသွားတဲ့ အထဲမှာ ငါထိပ်ဆုံးမှာ ပါနေလောက်ပြီး ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ ရင်ထဲမှာ ဆိုနင့်ကြေကွဲ ပြီးမျက်ရည်တွေ အကြီမ်ကြိမ်ကျမိပါတယ် ဖတ်နေယင်းနဲ့ပေါ့. တခါမှလည်းဒီလို စာမရေးဘူးပါဘူး.စစ်အစိုးရရဲ့နည်းပရိယာယ်တွေ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းတွေ ကြားမှာ ရှင်သန်လာရတဲ့ အခုခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို အပြစ်တင်လို့လည်းမရဘူးနော်ဆရာမ သူတို့ကို ဘာမှစိတ်မ၀င်စားနိုင်အောင်စီမံကိန်းတွေနဲ့ လုပ်ထားတာကို ပြောချင်တာတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆရာမ နောက်မှ ဖြေးဖြေးဆီရေးသွားမယ်နော်